शुक्रबार, जनवरी 8, 2010 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 स्कट हार्डडिग्री
यो पोष्ट ती व्यक्तिहरूको लागि संसाधनको उद्देश्यले हो जुन स्वीकार गरिन्छ, थाहा छ तिनीहरू ईमेल च्यानलबाट अधिक मूल्य लिन सक्दछन्। केहि फरक छैन भने बाहिरका पेशेवरहरू भाडामा लिने निर्णय गर्नुहोस्, जस्तो कि ईमेल मार्केटिंग एजेन्सी, वा घर भित्र प्रतिभा; यो मार्गनिर्देशनले तपाईंलाई तपाईंको हालको ईमेल मार्केटिंग प्रयासहरू मुल्या assess्कन र मूल्याval्कन गर्न मद्दत गर्दछ।
ईमेल एक दशकको लागि मार्केटिंग workhorse भएको छ, र यो निकट भविष्यमा परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। यसले लक्ष्यीकरणलाई अनुमति दिन्छ किनकि यो डाटा संचालित छ। यो प्रत्यक्ष बिक्री ड्राइव। यसले सम्बन्ध, वफादारी र विश्वास निर्माण गर्दछ। यसले अन्य प्रत्यक्ष च्यानलहरू मार्फत बिक्रीलाई पनि समर्थन गर्दछ:
यस अनुसार प्रत्यक्ष मार्केटिंग संघ, ईमेल मार्केटिंगले यसमा खर्च गरेको प्रत्येक डलरको लागि $ .43.62$. .२ को एक ROI उत्पन्न गर्दछ, जुन पहिलो रनर-अपको भन्दा दोब्बर छ।
द्वारा सारांश मार्केटिंग शेर्पा राज्यहरु, ती मानिसहरु जसले आफ्नो ईमेल प्रोग्रामको प्रभावकारता घट्दै देख्दछन उनीहरूको रणनीति प्रति छोटो-दृष्टिगत संगठनात्मक व्यवहार हुने सम्भावना बढी हुन्छ। ई-मेलको लगानी उन्मुख दृष्टिकोणको साथ संगठनहरू पुरस्कृत हुन्छन्।
यो सीएमओ काउन्सिलमार्केटि Marketing आउटलुक '० Report रिपोर्टले 08० बजारका योजना र विचारहरूको समीक्षा गर्‍यो। ईमेल मार्केटिंग लगानीको लागि शीर्ष लक्ष्य क्षेत्र थियो।
खुद्रा विक्रेताको सर्वेक्षणमा, Shop.org "ई-मेल समग्र उल्लेख गरिएको सफल रणनीति हो" भनिएको छ।
ईमेल मार्केटिंग इन-हाउस ह्यान्डल गर्ने हो?
यदि तपाईंसँग अवस्थित एजेन्सी सम्बन्ध छैन वा पर्याप्त इन-हाउस प्रतिभा छ भने, यो विचार गर्नुहोस्:
तपाइँ (तपाइँ वा तपाइँको टोलीको अर्थ) तपाइँको व्यवसायलाई थाहा छ; के तपाईं ईमेल मार्केटिंगमा पनि राम्रो पोख्त हुनुहुन्छ?
यदि हो भने, के तपाईंसँग प्रयास गर्न अप्टिमेट गर्न समय र शक्ति छ?
तपाइँको एकीकृत मार्केटिंग र CRM तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु को तुलना कसरी गर्छ?
के तपाईंको ईमेल मार्केटिंग ड्राइव बिक्री, वफादारी निर्माण, र मार्केटिंग लागत कम गर्दछ?
के तपाईंको ईमेल प्रोग्राम अनुसन्धान र / वा ऐतिहासिक डाटामा आधारित छ?
के तपाईंको घरको कामले बचत गर्दछ वा तपाईंको पैसा खर्च गर्दछ?
पहिले नै एक विशेषज्ञ छ?
यदि तपाईंसँग पहिले नै मार्केटिंग एजेन्सी वा अन्य बाहिरी मद्दत छ भने, आफैलाई सोध्नुहोस्:
के तिनीहरू ईमेलमा विशेषज्ञ छन् वा ती हुन् पूर्ण सेवा?
के तिनीहरू माथिको अन्वेषणको साथमा लाइनमा रोइ उत्पन्न गर्छन्?
के उनीहरूले हामीलाई बढाइचढाइ नगरी सोच्दछन्?
के उनीहरूले हाम्रो लक्षित बजार र व्यापार प्रक्रियाहरू बुझ्दछन्?
के उनीहरूले खोजी गरी सबै विकल्पहरू मुद्रीकरण गरेका छन्?
के तिनीहरूको काम ताजा, उत्साहजनक, र उत्तम अभ्यासहरूको परावर्तनको लागि हो?
ईमेल मार्केटिंग समीकरणको टुक्रा
ईमेल मार्केटिंगले ग्राहकको अधिग्रहण, सीसा पालनपोषण, ग्राहक पुन: सक्रियण र अवधारणा, र निश्चित रूपमा प्रत्यक्ष बिक्री समावेश गर्न सक्दछ, जसको मतलब प्रक्रिया र सेवाहरूको एक होस्ट सम्भावित संलग्न छन्, सहित:
रणनीति र अनुसन्धान
सम्पादकीय र प्रचार योजना
प्रतिलिपि लेखन र सामग्री विकास
डिजाइन र कोडिंग
सूची विकास र सामुदायिक भवन
सूची विभाजन र सूची संवर्धन
व्यवहार र ग्राहक प्रोफाइल
सन्देश वितरण र वितरण मोनिटरिंग
ईमेल सेवा प्रदायक (ESP) वा इन-हाउस मेलि S समाधान मूल्या E्कन
लीड पोषण र प्रत्यक्ष / माथि / क्रस बिक्री
मल्टिभेरिएट परीक्षण र कार्यक्रम अनुकूलन
यदि माथिको सूचीले तपाईंले गरिरहेको भन्दा बढी समावेश गर्दछ भने, यो एक कडा सूचक हुन सक्छ कि तपाईं यस आकर्षक च्यानलको कम-उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सायद यो नयाँ ताजा मार्केटिंग पार्टनरको लागि समय हो वा हुनसक्छ तपाईंले बजेट पुन: केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ र / वा तपाईंको इन-हाउस टीमलाई थप तालिम प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ?
यदि तपाईंले (आधिकारिक रूपमा) निर्धारित गर्नुभयो कि तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ भने, सम्पर्कमा रहनुहोस्। दोस्रो र अन्तिम किस्तामा हामी तपाईको योग्य प्रतिभा पत्ता लगाउन र मूल्या unique्कन गर्नका लागि कसरी छलफल गर्नेछौं जुन तपाईंको अनौंठो आवश्यकताहरू मिल्दछ र तपाईंको बजेट प्रतिबन्धहरू पूरा गर्दछ।
टैग: cmo काउन्सिलसीआरएम एकीकरणप्रत्यक्ष marekting संघईमेल र खुद्राईमेल सीआरएमईमेल एकीकरणइमेल मार्केटिङईमेल मार्केटिंग एजेन्सीईमेल मार्केटिंग विशेषज्ञलगानीमा ईमेल मार्केटिंग रिटर्नईमेल अनुकूलनईमेल रोईमार्केटिंग शेर्पाखुद्राstore.org
जनवरी 8, 2010 3:10 बजे
स्कट - यो तपाइँको आज सम्मको मेरो मनपर्ने पोस्ट हो। गजब सल्लाह! धेरै कम्पनीहरूले आफूसँग भएका स्रोतहरूसँग संघर्ष गर्छन् र उनीहरूको सम्भावनामा पुग्न सक्दैनन्। विज्ञहरूसँग साझेदारी गर्नु सधैं उत्कृष्ट निर्णय हो!
जनवरी 8, 2010 3:41 बजे
धन्यवाद डग! भाग दुईमा म इमेल मार्केटिङ विशेषज्ञलाई भर्ती गर्न 8 मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू रूपरेखा गर्नेछु।